ပရီးမီးယားလိဂ် အဓိက ဇာတ်ကောင် ဖြစ်လာမယ့် VAR
11 ส.ค. 2562 - 23:35 น.
ပရီမီးယားလိဂ်မှာ အရေးပါလာမယ့် VAR
အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်ကတော့ ဒီနှစ်မှာ Video Assistant Referee (VAR) ကို ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်အသုံးပြုပြီဖြစ်ပြီး ရာသီအဖွင့်မှာပဲ မီဒီယာတွေရဲ့ အထက်မှာ ထိပ်တန်းသတင်းအဖြစ် နေရာယူခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက စလို့ ဒီနည်းပညာကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုရခဲ့ပေမယ့် အခုချိန်အထိ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တွေဖြစ်နေဆဲပါ။
အင်္ဂလန်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက စပြီး ပြည်တွင်း ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ စတင် အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ အင်္ဂလန် ဒိုင်လူကြီးတွေကို မေးခွန်းထုတ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံ မန်စီးတီးနဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းတို့ ပွဲမှာလည်း VAR ဟာ အဓိက နေရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တာပါ။
မန်စီးတီးဖက်က သွင်းယူခဲ့တဲ့ တတိယဂိုးမှာ စလာတင် လူကျွံနေတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ ပေးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကို ဂျေဆုက ပိတ်သွင်းခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီဂိုးကို VAR နဲ့ ပြန်ကြည့်တော့ စလာလင် ဘောလုံး မရခင် သာမန် မျက်လုံးနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့ လူကျွံနေခဲ့လို့ ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါ စတာလင် ရခဲ့တဲ့ ဒုတိယဂိုးကလည်း မားရက်ဇ် ပေးတဲ့ ဘောလုံးကို လူကျွံတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်း ပြန်ကြည့်တော့ လူမကျွံတာကြောင့် ဂိုးပေးခဲ့တာပါ။
ပွဲအတွင်းမှာပဲ အဂွဲရိုး ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းချိန်မှာ ဖာဘီယန်စကီး ကာကွယ်ခဲ့ပေမယ့် ဖီဖာရဲ့ အသစ်ထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းအရ ပြန်ကန်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ ဖီဖာ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းမှာ ဂိုးသမားဟာ တစ်ဖက်က ကန်သွင်းသူ ဘောလုံး မထိမီ အနည်းဆုံး ခြေထောက် တစ်ဖက် စည်းပေါ်မှာ ရှိရမှာဖြစ်သလို ကိုယ့် ကစားသမားကလည်း ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းသူ ဘောလုံး မထိခင် ဧရိယာထဲကို ဝင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းပါ။ ဒိုင်လူကြီး မိုက်ဒင်းက ဖာဘီယန် စကီး ကာကွယ်ခဲ့ပေမယ့် အဂွဲရိုး ကန်သွင်းချိန်မှာ ဝက်စ်ဟမ်းဖက်က ကွင်းလယ်လူ ရိုက်စ် ဧရိယာထဲကို ကြိုဝင်လာခဲ့လို့ ပြန်ကန်ခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်က ကွင်းတွေမှာ VAR ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ စတင် အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်တဲ့ VAR ကို ဘယ်အခြေအနေ တွေမှာ သုံးမလဲ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီအချက် ၄ချက်နဲ့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၁) ပွဲအတွင်းမှာ ရတဲ့ သွင်းဂိုးတိုင်းကို VAR က ပြန်လည်ကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပြီး ဂိုးပေး၊ မပေးကို ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်သလို ဂိုးမရခင် ဖြစ်လာတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း ကြည့်ရှုမှာဖြစ် ပါတယ်။
၂) နောက်တစ်ခုကတော့ ပင်နယ်တီဖြစ်စေမယ့် အချက်တွေ အားလုံးကို စောင့်ကြည့်မှာပါ။ ဧရိယာအတွင်း ပင်နယ်တီ ရဖို့ ကြိုးစားမှုတွေ၊ လက်ထိဘောတွေနဲ့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖျက်ထုတ်မှုတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ လက်ထိဘောမှာလည်း ကစားသမားရဲ့ လက်က ပင်ကိုယ် အနေအထားအတိုင်း ရှိနေရင် ပင်နယ်တီ ပေးမှာ မဟုတ်ပေမယ့် တကယ်လို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ခဲ့မယ်ဆို ပင်နယ်တီအဖြစ် အဆုံးဖြတ်မှာပါ။
ပရီးမီးယားလိဂ် VAR ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အဓိက တာ၀န်ယူနေတဲ့ ဒိုင်လူကြီးဟောင်း မိုက်ရီလေး
၃) ပွဲအတွင်း ကြမ်းတမ်းစွာ ကစားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ ဥပဒေ ပြင်ပက ကစားမှုတွေ အားလုံးကို VAR ပြန်ကြည့်ပြီး အနီကတ်ပြသင့် မသင့် ဆုံးဖြတ်မှာပါ။ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ဘန်လေနဲ့ ဆောက်သမ်တန်တို့ ပွဲမှာ ဆောက်သမ်တန် ကစားသမားကို ဘန်လေ ကစားသမား ဖက်က ကြမ်းတမ်းစွာ ဖျက်ထုတ်ခဲ့ပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာမဟုတ်လို့ ထုတ်ပယ်ခံရခြင်း မရှိခဲ့တာပါ။ ပွဲကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေမယ့် အနီကတ်ကို တတ်နိုင်သမျှ သေချာကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ဒိုင်လူကြီးတွေကတော့ ဆိုပါတယ်။
၄) ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲတွေမှာ အများဆုံး တွေ့လေ့ရှိတာက ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ အမှားတွေပါ။ မနှစ်ကအထိ ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ လွဲမှားစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ ဒိုင်တွေ မမြင်နိုင်တဲ့ အနေအထားကနေ စည်းကြပ်ဒိုင် အကူအညီတောင်းပြီး ဆုံးဖြတ်တာတွေထက် VAR ကို အသားပေးပြီး ကြည့်ရှု့ကာ အမှားနည်းအောင် ကြိုးစားဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
( ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ VAR ကို ပြန်ကြည့်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ကွင်းရဲ့ Big Screen ကတွေမှာ ပြန်လည် ပြသပေးမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကို ပရိသတ်ကို အသိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
อัลบั้มภาพ ပရီးမီးယားလိဂ် အဓိက ဇာတ်ကောင် ဖြစ်လာမယ့် VAR